Isu tinofananidza mikana pakati peFusion Drive uye SSD | Ndinobva mac
Paunenge uchitenga Mac: Fusion Dhiraivha kana SSD?
Carlos Sanchez | | dzakawanda
Kumwe kwekusahadzika kukuru pakutenga Mac kunowanzo sarudza pakati peSSD disk kana kusarudza iyo yemasanganiswa Fusion Drive, kana chii chakafanana: Kunonyanyisa kumhanya pamutengo wediki nzvimbo kana musanganiswa pakati pechisimba cheyakaomeswa mamiriro dhiraivha uye kugona kweyakajairwa akaomarara madhiraivha.
1 SSD ndiyo sarudzo yako kana ...
2 Fusion Drive inofarira iwe kana ...
SSD ndiyo sarudzo yako kana ...
Kana iwe uchitsvaga iyo yekumhanyisa kumhanya yekuwana mafaera neSSD iwe unogona kusvika kumhanyisa iwo muganho paGG / s -According kuna Mac uye configuration-, kunyange hazvo chinhu chakajairika ndechekuti inofamba pakati pe500 ne800 Mb / s. Tiri kutaura pamusoro pekupisa kumhanya, kwakanakira kuvhura makuru RAW madhijitari madhijitari muLightroom kana yekuvhura akawanda mavhidhiyo mafaera pasina kumirira, zvisinei hazvo iyo faira iri. Nokubvisa chero chikamu chemuchina, nguva dzekuwana dzinodzikiswa zvakanyanya kuti dzipe pfungwa yekusavapo dzimwe nguva.
Fusion Drive inofarira iwe kana ...
Kana iwe usiri kuda kurasikirwa nekukurumidza kuwana kune mafaera asi uchida kuwanda kugona kupfuura izvo zvinowanzo kuwanikwa muSSD, saka unofanirwa kuenda kuFusion Drive, chinova chinhu chinopfuura musanganiswa ne chikamu SSD uye chikamu hard disk zvakajairika. Nekuda kweichi chitsama, Apple yakagadziridza OS X kuti iise otomatiki mafaera atinonyanya kushandisa mundangariro yakasimba, nepo mashoma ashandiswa kana iwo anogona kunge achinonoka kupinda achienda kuHDD. Kune mushandisi asingade kushanda kwakanyanya, inogona kunge iri yakanaka nekuti inotipa yakawanda nzvimbo kupfuura iyo yakaenzana SSD mumutengo pasina kupa zvachose kukwirisa uye kumhanyisa kumhanya. Ehezve, patinozadza dhisiki kunonoka kunova kunonyanya kuoneka, hongu.
Semafungiro ehukama, ini Ini ndinoenda kunochengeterwa SSD yakachena nekumhanya kwayo uye nekuvimbika, uchifungidzira kuti kana paine nzvimbo yakawanda inodiwa panogara paine sarudzo yekutenga yekunze Thunderbolt kana USB 3.0 disk.
Asi Fusion Drive iri zvakare sarudzo yakanaka yehuwandu hwayo uye yeakanakisa manejimendi iyo Apple inogadzira yemhando mbiri dzemadhisiki, saka pakupedzisira sarudzo inoenderana zvizere nemabasa anofanira kuitwa neMac uye zvaunofarira pakati pekuita uye kugona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Paunenge uchitenga Mac: Fusion Dhiraivha kana SSD?
Jhoan medina akadaro
Ini ndaive nekusahadzika kumwechete uye ini ndakaenda kune yakasimba unit, chikonzero? Ini handioni zvakanaka, kuti ini handikwanise kubata mafaera anoenda kune yega diski, uye zvakatonyanya, kana iyo solid unit yazara, haichagone kudururwa, uyezve yangu Fusion Dhiraivhu, ichave yakajairwa dhisiki
Pindura Jhoan Medina
Iyo fusion drive yakaita sekumhanyisa 0, ndiko kuti, kana diski ikakanganiswa unorasikirwa nezvose.
"Kana solid solid razara, haichakwanise kudururwa, uyezve yangu Fusion Drive ichave yakajairwa diski"
Iyo SSD inoshanda se cache. Pane SSD disk, sisitimu inosiya mafaira anoshandiswa zvakanyanya, uye ayo anoshandiswa zvishoma enda kuHDD. Zvese otomatiki.
Iyo yakanaka sarudzo yekuti usatombo kunetseka nezve kwaunosiya faira, zvese zvinongoitika (Yakanyanya Apple maitiro),
OWC inotangisa nyowani 1TB SSD yeMacBook Air
Inoshamisa infographic nezvose zvigadzirwa zveApple uye software